ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု rotary လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု rotary လျှပ်စစ် actuator
AOX-မေး စီးရီး ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု rotတစ်ဦးry လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ လေးပုံတပုံ အလှည့် လုပ်ငန်းလည်ပတ် လျှောက်လွှာများ ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ် ဘောလုံးကို, လိပ်ပြာ, ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် တူသော usတစ်ဦးges.Our တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့rs နိုင် ဖြစ် စိတ်ကြိုက် အညီ သို့ အဆိုပါ အထူး လိုအပ်ချက်များ ၏ cusသို့mers. Bအဖြစ်ed အပေါ် တစ်ဦး ကျယ်ဝန်းသော rတစ်ဦးnge ၏ ထုတ်ကုန် အပါအဝင် မြင့်သော perဘို့mတစ်ဦးnce ပေါင်းစုံ အလှည့်, pတစ်ဦးrtl အလှည့်,နှင့် lineတစ်ဦးr တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့rs, ကျွန်တော်တို့ ၏fer တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးted solutiအပေါ်s ဘို့ တစ်ဦးll vတစ်ဦးlve အမျိုးအစားများ, rတစ်ဦးnging မှ bတစ်ဦးll အဆို့ရှင် သို့ dတစ်ဦးmpers.
AOX-မေးစီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်း rotary လျှပ်စစ် actuator များအတွက် 3. မော်တော်: အထူးဒီဇိုင်း induction motor ကိုအပူကျော်ထံမှထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်မြင့်မားစတင် torque နှင့်အပူကာကွယ်တပ်ဆင်ထားမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည် generate ရန်။
4. ရွေ့ပြောင်းဒီဇိုင်း: အဆိုပါ AOX-မေးစီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်း rotary လျှပ်စစ် actuator အမြဲတမ်းထုတ်ကုန်များ modular ဒီဇိုင်းကိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ အဆိုပါပိုမိုစုံလင်လာအစိတ်အပိုင်းများထုတ်ကုန်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီစုဝေးနှင့်စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုပူဇော်နိုင်သေချာစေ။ အဆိုပါ AOX-မေးစီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်းများ၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများ rotary လျှပ်စစ် actuator ကြားရှိရွှေခရီးထွက် connector ကို interface ကိုထုတ်ကုန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့ရိုးရှင်းပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအသိဉာဏ် module တစ်ခုမြင့်မားပေါင်းစည်းမှုနှင့် single-chip ကို microcomputer နဲ့့ Analog circuit ကို၏အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှုနဲ့ထိန်းချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ချမှတ်။
1. ရှိပါတယ်ကောင်းသောညှိနှိုင်းမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသေချာဖို့ actuator နှင့်ညှိနှိုင်းမှုယန္တရားအပေါငျးတို့သအဆစ်မှာအဘယ်သူမျှမဖြည်ရှင်းလင်းရေးဖြစ်သင့်, နှင့်ဆက်သွယ်မှုမူလီအညီအမျှနဲ့အချိုးကျတပ်ဆင်ခစဉ်အတွင်းတင်းကျပ်ရပါမည်။
ဂရုတစိုက်ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲကိုဖတ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးနှင့်သတ်မှတ်ထားသောစစ်ဆေးရေးနည်းလမ်းအရသိရသည်အတည်ပြုရန်, အ AOX-မေးစီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်း rotary လျှပ်စစ် actuator ကိုသုံးပြီးခင်မှာ 2. ။ လျှပ်စစ် actuator စစ်ဆင်ရေးထဲသို့သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်မီ, ထို site မှာ power supply ဗို့အားအဆိုပါစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သတ်မှတ်ထားသောလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ဝါယာကြိုးပုံမှအတိုင်းဝါယာကြိုးစစ်ဆေးပါ။ ဝါယာကြိုးများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ Terminal ကို၏ဝါယာကြိုးမြဲမြံစွာဖြစ်သင့်အခါဝါယာကြိုးအရေအတွက်အာရုံစိုက်။
3. AOX-မေးစီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်း rotary လျှပ်စစ် actuator မကြာခဏထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။ မြင့်မားသောတုန်ခါမှုနှင့်အတူနေရာ, အမြဲ connectors ကောင်းသောအဆက်အသွယ်နှင့်သော့ခတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရှိမရှိရှိမရှိ, အစွဲစေချောင်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
AOX ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းကိုအလွန်အရေးပါမှုကိုအလေးထားမှာ, နှင့်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏ခိုင်ခံ့နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ AOX ပြည့်စုံဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးနှင့်အများအပြားနည်းပညာဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြည်တွင်းမှာဖွံ့ဖြိုးထုတ်ကုန်တန်ဖိုးထား, ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုလေးစား, AOX အဖွဲ့သည်လုံးဝ 98 utility ကိုမူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့, ကြှနျုပျတို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ်စောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ AOX-မေးစီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်း rotary လျှပ်စစ် actuator များအတွက်အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောအရည်အသွေးကိုစံထုတ်သယ်။
မေး: AOX-မေးစီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်း rotary လျှပ်စစ် actuator ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
Q: ပြီးနောက်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပေးပို့သင့်ရဲ့ quotation အများနှင့်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုခံယူနိုငျသောအခါငါသည်သင်တို့၏ AOX-မေးစီးရီးဒေသခံအဝေးထိန်း rotary လျှပ်စစ် actuator စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပါက?
hot Tags:: ဒေသဆိုင်ရာ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု rotary လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်
Rotary လျှပ်စစ် actuator နှင့် torque ပွောငျးလဲ